टायलर ब्रीज WWE हॉल अफ फेमर संग काम गर्ने सम्झना - Wwe
'यो पागल हो' - टायलर ब्रीज WWE हॉल अफ फेमर संग आफ्नो खेल संगै राखेको सम्झना
एक भर्खरको साक्षात्कार मा, टायलर ब्रीज NXT TakeOver: ब्रुकलिन मा आफ्नो म्याच कुश्ती लीजेंड र WWE हॉल अफ फेमर जुशिन थन्डर लाइगर संगै राखेको सम्झना। ब्रीजले खुलासा गरे कि लिगर धेरै विनम्र थिए र उनीहरुका सम्पूर्ण आदानप्रदान को दौरान सम्मानजनक थिए किनकि उनीहरु स्पट मा निर्णय गरे।
बोल्दै क्रिस भान Vliet संग अन्तरदृष्टि , ब्रीज जुशिन थन्डर लाइगर को बिरूद्ध आफ्नो म्याच चर्चा र के मैच बनाउन मा गए:
'मसँग केहि विचारहरु थिए र हामी यसलाई सँगै राख्छौं।' ब्रीजले भने। 'मेरो लागि पागल भाग थियो जब मैले भनेँ' सायद मँ तपाइँलाई सम्हाल्छु र म जान्छु र माथि बस्छु। त्यसोभए तपाइँ मलाई केहि संग ल्याउनुहुन्छ र तपाइँ जानुहुन्छ र माथि राख्नुहुन्छ। ' उनी जान्छन् 'म माथि राख्छु?' मैले 'हो' भने। उहाँ जानुहुन्छ 'ओह धन्यवाद तपाइँलाई धन्यवाद [मेरो हात हल्लाउँछ।' ' म जान्छु 'तपाइँको मतलब के हो धन्यवाद ?! यो गजब छ। ' उसले भन्यो 'तपाइँ मलाई आफ्नो सामान गर्न दिइरहनुभएको छ।' निस्सन्देह, म किन गर्दिन? हामीले केहि अरु गर्यौं र मैले भने 'सायद तपाइँ सेल्फी स्टिक लिनुहुन्छ?' फेरि उनी भन्छन् 'म सेल्फी स्टिक लिन्छु? धन्यवाद धन्यवाद [फेरि हात मिलाउँछ]। ' के हुदैछ?! यो पागल हो, उहाँ आफ्नो श्रेणी मा एक किंवदंती हो। उहाँ यहाँ बसेर मलाई धन्यवाद दिनुहुन्छ कि उनी जे गर्न चाहन्छन्, कुनै अहंकार छैन। '
लिगर को ब्रीज संग मुठभेड मात्र WWE मा उनीसंग भएको मात्र एक मात्र खेल थियो। ब्रीजले यो पनि भने कि उनी WWE मा कुश्ती दिग्गज संग प्रतिस्पर्धा गर्ने सम्मान पाउने एक मात्र हुनुमा सम्मानित महसुस गर्दछन्।
WWE NXT टेकओभर: ब्रुकलिन मा जुशिन थन्डर लाइगर को बिरुद्ध टायलर ब्रीज कसरी सफल भयो?
सक्छ @mmmgorgeous Jushin 'थन्डर' लाइगर TONIGHT मा स्पटलाइट चोरी #NXTTakeover ? http://t.co/4o4hhdTAy0 pic.twitter.com/cVZyDhBPwT
- WWE (WWWE) अगस्त २२, २०१५
म्याच ब्रीज को WWE क्यारियर को एक आकर्षण को रूप मा मानिन्छ। जे होस् लाइगरले म्याच जिते, ब्रीजले स्पटलाइटमा चम्किने मौका पायो र उनीमा धेरै आँखा छ।
त्यो पक्कै काम गरीयो जस्तै ब्रीज WWE मा आफ्नो समय को दौरान लोकप्रियता को एक ठूलो सौदा कमाउन को लागी गए।
लिगर, अर्कोतर्फ, WWE मा अर्को म्याच कुस्ती कहिल्यै। जे होस्, उनी २०२० को कक्षा को हिस्सा को रूप मा WWE हल अफ फेम मा शामिल गरीएको थियो। उद्योग मा उनको योगदान वर्तमान कुश्ती मा एक ठूलो प्रभाव पारेको छ र उनी धेरै प्रशंसकहरु को नजर मा सबै समय को सबैभन्दा महान पहलवान बनी रहेका छन्।
पौराणिक र अब को लागी निरपेक्ष GOOSEBUMPS @WWE हॉल अफ फेमर, IgerLiger_NJPW ! #WWEHOF pic.twitter.com/CsWTvbtvlV
- WWE (WWWE) अप्रिल,, २०२१
तपाइँ जुशिन थन्डर लिगर संग ब्रीज को मुठभेड को बारे मा के सोच्नुहुन्छ? तल टिप्पणी सेक्सन मा आफ्नो विचार साझा गर्नुहोस्।
म उदाहरण को बारे मा भावुक छु
तपाइँ कसरी थाहा पाउनुहुन्छ यदि एक सहकर्मीले तपाइँलाई मन पराउनुहुन्छ
कसरी मानिसहरु संग कुरा गर्न रोक्न
कसरी एक केटा संग प्राप्त गर्न को लागी कडा खेल्न को लागी
कसरी थाहा पाउने यदि एक केटीलाई थाहा छ तपाइँ उसलाई मन पराउनुहुन्छ